2021 Taurus အတွက် Lucky လား? - Oscရာဝတီ
2021 Taurus အတွက် Lucky လား?
မေးခွန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများ - Taurus လစဉ် Horoscope
အရ2021များအတွက် horoscope ဟောကိန်းများက, နှစ်2021အောက်မှာမွေးဖွားလူများအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းပေးလိမ့်မယ်ကမော်တော်ယာဉ်များကိုဝယ်ခြင်းငှါ။ သင်သည်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးရှိလိမ့်မည်။ ပညာရေးတွင်အောင်မြင်မှုမရှိပါ။ သို့သော်သင်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ပြီးစိတ်ရှည်သည်။
ဤသည်သင်၏ Lucky နံပါတ်များဆောင်းပါးဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤလအတွက်ကံကောင်းသည့်နံပါတ်များကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်အားအမှန်တကယ်စွမ်းအားတော်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ကံကောင်းသည့်နံပါတ်များကိုအကြိမ်ကြိမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသို့မဟုတ်လောင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုရန်လေ့ကျင့်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကံကောင်းသောနံပါတ်များကိုထိုင်းနိုင်ငံ၌ထီဖြင့် သုံး၍ နံပါတ်သုံးခုကိုအသာရခဲ့ပြီးပထမနံပါတ် ၃ ခုနှင့်ပုံသေလက်မှတ်များတွင်ဆth္ဌမနံပါတ်ထည့်သည်။ သို့သော်လက်မှတ်အနိုင်ရခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အနိုင်ရခဲ့သည်။ ငါဒေါ်လာတစ်တန်လက်မှတ်တစ်ချောင်းဝယ်ပြီးသုံးလသို့မဟုတ်လေးလကြာအောင်လက်မှတ်များစွာ ၀ ယ်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်လောင်းကစားခွင့်မပြုလျှင်၊ လောင်းကစားခွင့်မပြုလျှင်၊ မည်သည့်ထီအမျိုးအစားကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ မည်သည့်ဘောလုံးအမျိုးအစားကိုသင်ရွေးနိုင်သည်၊ မူတည်၍ ထိုနေရာတွင်တစ်လလျှင်နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သည်။ မင်းပစ္စည်းတွေကိုပြန်စီလို့ရမလား သင်ကံကောင်းသည့်နံပါတ်များကိုသုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်လုံးဝပျော်စရာကောင်းသည့်သင်၏ပင်ကိုယ်သိစိတ်ကိုလိုက်နာရမည်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကံကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေကိုပေးဖို့ငါ့မှာတာဝန်မရှိဘူး။ သင်သူတို့ကိုသင်အသုံးပြုလိုသည့်နည်းနှင့်သုံးရန်လိုသည်။
ပထမ ဦး စွာသင့်အားသင်၏အကြံဥာဏ်ကိုသင်၏မွေးစာရင်းအတွက် numerology natal chart တွက်ချက်မှုတွင်သင်၏နာမကိုရှာဖွေရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ မွေးဖွားချိန်တွင်သင်ပေးထားသောအမည်။ အရေးမကြီးပါ။ သင်၏အမည်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါကဤအမည်အားသင်အမည်ဖြင့်သင်အသုံးပြုနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်မွေးဖွားချိန်တွင်မွေးဖွားခြင်းမွေးဖွားခြင်းသည်သင်၏ ၀ ိညာဉ်၌အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကိုကြည့်နေသည်။ ငါအောက်ဖော်ပြပါ link ကိုထည့်သည်။ ၎င်းသည် 1B သည် ၂ ဖြစ်သည်။ နံပါတ်များအားလုံးကိုပေါင်းပြီးဘုံနံပါတ်သို့ယူဆောင်လာသည်။ အကယ်၍ သင်က ၂၂၊ ၁၁ ကိုရရှိလျှင်၊ ၄ င်းကို master နံပါတ်အဖြစ်လျှော့မတွက်ပါက၊ သင်၏အမည်သို့မဟုတ်မွေးသက္ကရာဇ်တွင်မည်သည့်နံပါတ်များမဆိုပျောက်နေပါက? သင်၏မွေးသက္ကရာဇ်ကိုထိုနံပါတ်များနှင့်မလောင်းပါနှင့်။ သင်4နှင့် 8 ကိုလွတ်သွားပြီဆိုပါကကျွန်ုပ်သည်ဤနံပါတ်များထဲသို့ထည့်သည့်အိမ်များတွင်မနေပါနှင့်သို့မဟုတ်ထိုနံပါတ်များကိုလောင်းခြင်းသို့မဟုတ်မသုံးပါနှင့်။ ၎င်းသည်၎င်းနံပါတ်များနှင့်အတူ karma ကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဤနံပါတ်များရှိပါကဆက်သွယ်မှုသည်မကောင်းပါ။ အသုံးပြု, ထို့နောက်သူကတစ်ခုခုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။
ဒါကမကြီးဘူး၊ ဒါဆိုမင်းရဲ့ကံကောင်းတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုမွေးဖွားတဲ့ရက်စွဲနဲ့တူအောင်လုပ်ပါ။ သင်၏သမီးကညာနှင့်မွေးသက္ကရာဇ်တွင်သင့်တွင်မည်သည့်နံပါတ်များရှိသည်။ ဒီတော့ခင်ဗျားရဲ့မွေးသက္ကရာဇ်ကိုပေါင်းထည့်ပြီး ၁ နဲ့ ၉ ကြားကြားယူပါ၊ ဒါမှမဟုတ် ၁၁ ဒါမှမဟုတ် ၂၂ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကမင်းရဲ့မွေးရာပါလမ်းကြောင်းပါပဲ။ မင်းရဲ့ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းနံပါတ်ကိုသင်ရက်စွဲအတိုင်းထည့်လိုက်တာပဲ။ အကယ်၍ သင်သည်လတစ်လ၏ဒုတိယနေ့တွင်မွေးဖွားပါကသင်၏ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းနံပါတ်သို့သင်ပေါင်းထည့်ပါမည်။ ၎င်းသည်အခြားကံကောင်းသောနံပါတ်တစ်ခုကိုသင်မွေးဖွားရာနံပါတ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ နာမည်လား သို့မဟုတ်သင်မွေးဖွားသည့်ရက်စွဲသို့မဟုတ်အခြားကံကောင်းသောနံပါတ်တစ်ခုကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏ဘွဲ့မှာရှိသည့်အတိုင်းအတာ၊ ဒီဂရီမှန်ကန်ပါက၊ သင်မွေးဖွားလျှင် ၁၉ ဒီဂရီကင်ဆာသို့မဟုတ် ၁၉ ဒီဂရီကင်ဆာတက်ခြင်း၊ ၁၉ ဒီဂရီသို့မဟုတ် ၁၉ ဖြစ်လိမ့်မည်။ နက္ခတ်ဗေဒင်အားဖြင့်သင်၏ကံကောင်းသောကိန်းဂဏန်းများဒီတော့ငါကိန်းဂဏန်းဗေဒနက္ခတ်ဗေဒင်အားဖြင့်မင်းရဲ့ကံကောင်းတဲ့ကိန်းဂဏန်းများကိုငါပေးနေတယ်။ ငါကပတ်ပတ်လည်တစ်ခုလုပ်ပြီးကဒ်ပြားတွေနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတစ် ဦး ချင်းစီသီးခြားစီအမှတ်အသားတစ်ခုစီကိုတွေ့လိမ့်မည်။ Uranus Taurus မှာကတည်းကမေလအသစ်ဟာရှေ့ကိုသွားနေတယ်။
၎င်းသည်သင်၏ဘဏ္situationာရေးအခြေအနေနှင့်ဘဏ္finာရေးအခန်းကဏ္ brand သစ်ကိုဖွင့်နိုင်သည်၊ လူတိုင်းအတွက်ဘဏ္ancesာရေးသာမကဂြိုဟ်ဘဏ္ancesာရေးများအတွက်ပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မှယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်မံ၍ လုပ်စရာမလိုပါ။ ဒီတော့မင်းရဲ့ကံကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေကိုသာအာရုံစိုက်ပါ၊ ဒီဆောင်းပါးမှာပြန်လုပ်ပါ။ မင်းရဲ့ကံကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးငါပြောခဲ့တာတွေကိုဂရုတစိုက်လေ့လာပါ၊
ထို့ကြောင့်သင်၏ကြမ္မာလမ်းကြောင်းနံပါတ်ကိုသင်၏မွေးနေ့နံပါတ်သို့ထည့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် ၁၁ ရက်၊ ဒုတိယ၊ သတ္တမမြောက်မွေးဖွားလာပါကကံကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ကံကောင်းသောနံပါတ်ကိုမင်းရဲ့နာမည်နံပါတ်သို့ပေါင်းထည့်လိုက်သလား။ ငါဟာ ၁၁ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ ၁၁ ၁၁ ဖြစ်ပြီးငါ့နံပါတ်ကမွေးဖွားချိန်မှာ ၁၁ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကနှစ်ဆ ၁၁ ဖြစ်တယ်။ ကံကြမ္မာကို ၅ တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေတဲ့ pathoDouble 11 ဟာသဘာဝလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်သင်သိတယ်၊ ဒါကဒုံးပျံသိပ္ပံပညာမဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုရှာဖို့သင့်နံပါတ်တွေကိုသုံးနိုင်တယ်။ ငါပြောနေတာအတိအကျနားလည်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဆောင်းပါးမှာမင်း post မတင်ဘူးဆိုရင်မင်းသမီးရဲ့သမီးနာမည်ကကြီးနေတယ်။ သင်၏သမီးနာမည်မှပျောက်ဆုံးသောနံပါတ်များသည်သင်၏မွေးသက္ကရာဇ်ပေါ်တွင်လောင်းခြင်းမပြုသည်။ သင်၏ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းနံပါတ်သင်၏ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းနံပါတ်ကိုသင်၏မွေးနေ့နံပါတ်သို့ထပ်ထည့်လိုက်သည်ကံကောင်းသည့်နံပါတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းသည် ၅ ဖြစ်ပါကသင်၏မွေးဖွားခြင်းဖြစ်ပါက နံပါတ် ၂ ကဒါဆိုမင်းက ၁၁ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားလာပြီးမင်းရဲ့ကံကောင်းတဲ့နံပါတ်ကငါလိုပဲ ၇ ဖြစ်မယ်။
ကံကောင်းခြင်းနံပါတ် (၇) ၌ကျွန်ုပ်၏မြင့်တက်သောနိမိတ်လက္ခဏာအမှတ် ၉ မှာကျွန်ုပ်သည် ၉ ပေါ်တွင်လောင်းပြီးဖြစ်သည်။ တုန်ခါမှု ၉ ခုဖြင့်ဤလက်မှတ်ကိုအမှန်တကယ်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါဆိုသင်ဘာလုပ်ချင်လဲ၊ ဘာပေါင်းစပ်မှုမျိုးလုပ်ချင်လဲဆိုတာပဲစဉ်းစားပါ။ မင်းရဲ့နံပါတ်များအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ဒါကြောင့်မင်းကလက်မှတ်ဝယ်ဖို့၊ နံပါတ်တွေဘယ်လိုရွေးရမလဲ၊ သင့်နံပါတ်တွေကိုဘယ်မှာသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အကြံဥာဏ်ရှိရင်။ ထိုအခါရုံလုပ်ပါ။ ငါသိတယ်၊ မင်းလောင်းကစားခြင်းကိုအားပေးတယ်ဆိုတာမင်းသိပေမယ့်မင်းမှာသဲလွန်စတစ်ခုရှိပြီးမင်းမှာငွေရှာဖို့ဒါမှမဟုတ်ငွေရှာဖို့ဒါမှမဟုတ်မင်းအတွက်အကျိုးရှိမယ့်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုရဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆက်လုပ်ပါ။ ဒါ့အပြင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးမပြောဘဲငါတစ်ကြိမ်လောက်လုပ်လိုက်ရုံပဲ။ ပြီးတော့ငါဒီမှာမရှိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ Aries Pisces ကိုလုပ်ရမယ်။ ငါနင့်နိမိတ်တစ်ခုစီအတွက်ဘယ်ဆွဲရမယ့်ပုံကိုရွေးမယ်။ ဒါနဲ့ Aries နဲ့စမယ်။ ဒါဆိုမင်းအတွက်ဂဏန်းတွေရမယ်။ ဒါဆို ၁၈ ရမယ်။ Aries အတွက် ၁၈ ရမယ်။ ငါတို့မှာလည်း ၁၄ လုံးရှိတယ်။ အမေရိကမှာကိန်းဂဏန်းတချို့နဲ့ပိုကြီးတဲ့ထီတွေထဲကနံပါတ် ၄၄ ကနေ ၄၆ မျိုးကိုကြိုက်မှာပေါ့။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ရှာရန်ရှိသည်။
အကယ်၍ သင်ကကြီးမားတဲ့နံပါတ်များသို့တက်မယ်ဆိုရင်သင့်မွေးနေ့မှာနံပါတ်ကောင်းရှိမယ်ဆိုရင်၊ သင်လေးယောက်လေးခုရှိပြီးသင့်မွေးနေ့ဒါမှမဟုတ်သင့်နာမည်အတွက်နံပါတ်များကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ၄၂ နှစ်ပြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုခုနစျပါးနညျးတယျခုအမြှောက် ၁၁ အမြှောက်တစျခုဖွစျစနေိုငျ့တစျခုတစျခုဖွစျစနေိုငျ့တော့။ Aries အတွက် ၃၃၃၃ ရလြှငျအောကျတိုဘာ ၃ ခုရှိတယျ။ ဒါဆိုငါတို့ ၃ ။ ဒီတော့ Taurus ။
ငါဒီတစ်ခုဆှဲ။ ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Taurus 27 to 82 နဲ့သွားမယ်၊ ဒီတော့2+2က ၂၂ ။ ဒါဆိုသင်က 22 နဲ့5လုပ်လို့ရတယ်။ Taurus အတွက်7သည် 7Okay အတွက်5နှင့်2ဖြစ်လိမ့်မည်။
ယခုငါတို့ Gemini Gemini သို့ညှိလိုက်သည်။38 8 10 10 တစ်ညသည်နှစ်ဆယ်တစ်ဆယ့်ခုနစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူဟာသူဟာနောက်တဖန်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုအဖြစ်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်၊ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ဆယ်ငါးခြောက်ဆယ်ခြောက်ခြောက်ခြောက်သုံးခြောက်သွား ၃၆၆၆၆၆ သို့သွားနိုင်သည်။ အဆင်ပြေပါသည်။
Gemini okay, လာမည့်နိမိတ်လက္ခဏာ Cancer1 / 1 ငါလည်းတစ်ခုပြောနိုင်တယ်၊ ဒါက ၁၁၁ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင် ၁၁ လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီမှာနှစ်ချက် ၁၁ ရှိမယ်ဆိုရင်ကင်ဆာဟာ ၄ ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်။ 11 11 11 or 22 22 ကိုရတယ်။9က9ရတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂၉ ၂၉ ၂၁၁ ၂၂ လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ခင်ဗျားမှာအဲဒီမှာကင်ဆာနံပါတ်တွေရှိတယ်။ Alright 21 သည် Cancer အတွက်မှန်ကန်သည်။ LeoLeo နှစ်ဆယ့်သုံးယောက်ရှိသည်။ သုံးဆယ့်လေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ လေးဆယ့်ငါးယောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ လေးဆယ်ငါးလုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ၄၉ သို့မဟုတ် 94Okay ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဇာတ်ကောင်မှာ goOkay ဖြစ်သည်။ ၁၁၊ နှစ်ဆယ့်တစ် ဦး ၁၅ သို့မဟုတ် ၅၁ ကနေ ၂၁ ဒါမှမဟုတ် ၁၂ က GoVirgin Libra96Can be96697 and19OkayWaage19919ဒါဆိုခင်ဗျားကိုးခုနဲ့စိတ်သဘောထားရှိလား။ ၇ ခု။ ယောဟန် ၆၉ ပြောတယ်။ အိုး၊ အဲဒီမှာကိုးယောက်ရှိတယ်။
ဟုတ်တယ်၊ ခြောက်ဆယ့်ခုနစ်ဆယ်ခုနစ်ခုနစ်၊ ၁၆ လည်းငါ ၆ နှစ် ၆၁ ဖြစ်မယ်။ အဆင်ပြေ Scorpio၊ ၁၁ ကခြောက် ၆၆ ၆၆ ၂၆ ၆၂ ကသုညပေါ့။ ၁၀ ရမယ်။ တစ် ဦး ဖြစ်နိုင်တယ် 11 ဒါမှမဟုတ်တဆယ်ခုနစ်ဆယ်ခုနစ် 71 နှင့်သုံးခဲ့သည်။ အိုကေသုံးဆယ့်ခြောက် ၆၆၃-၆၆၂၆၇၃ ၃၀ နှစ်ဆယ်လိုင်းကွင်းဆက်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကောင်းပြီကောင်းပြီ၊ လေးနက်သောနိမိတ်လက္ခဏာမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့တွင် Scorpio Sagittarius သည်အလွန်များပြားသော stack များကိုသိပြီးနောက်ဆုံး Pisces အတွက်ရောမွှေရန်လိုအပ်သည်ဆိုသောနိမိတ်လက္ခဏာမပြမီကျွန်ုပ်တို့တွင်မည်သည့်လက္ခဏာရှိသည်။ အိုကေ၊ ဒီလို Sagittarius-Capricorn, Capricorn, ဒီဟာ Aquarius ပါ။ အိုကေသုံးရှစ်ခုနစ်တစ်ဆယ့်သုံးရှစ်ခုနစ်တစ်ဆယ့်သုံးသုံးရှစ်သုံးဆယ်ခုနစ် ၁၅၈၈-၇၈ Capricorn ငါ Capricorn ငါးခုအတွက်ဘာထပ်ရှိသေးလဲ။ သင်၏ကဒ်တွင်နတ်ဆိုးသုံးမျိုးငါးခုရှိပြီး 553 နှင့် Capricorn အတွက်ငါးဆယ့်ငါးယောက်၊ အိုကေ၊ ရေငန်ရှိသည်။
ငါငါးပြောင်းလဲရန်ရှိသည် ငါကအခြားကုန်းပတ်အလုံအလောက်မရွေးရသေးဘူး ကောင်းပါပြီ၊ ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စီးသည် ၄၄၄၁ ၁ ၁၁၂၄၄ ဖြစ်ပြီး၊ ၄၄ မှာ ၈ နှစ်နှင့်ကိုးဆယ့်ကိုးနှစ်ဖြစ်သည်။
ကိုးဆယ့်ရှစ်ဆယ်တစ်ဆယ့်ခုနစ်၊ တစ်ဆယ် and1020 ၁၀ တစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်အိုကေသည် AquariusOkay ကောင်းသည်။ Pisces Pisces ကောင်းကောင်းတစ်ခုရရှိပြီးနောက်ငါရောမွှေပါလိမ့်မယ်။ အိုကေ? ငါးတွေ ၁း၅၊ ၁၅၊ ၅၁ ဆိုတော့ခုလည်းခုနစ်ခုရှိမယ်၊ တစ်ခုက ၃ ခုတစ်လုံး၊ သုံးခုလား။ ဖြစ်နိုင်လား။ လေးဆယ့်လေးဆယ်မှလေးဆယ့်လေးဆယ့်လေးရှစ်ရှစ်သို့မဟုတ် ၈ အတွက်ကောင်းတဲ့ကိန်းဂဏန်းအနည်းငယ်ရှိသည်။ ၁ သည် Pisces အတွက် ၂ သို့မဟုတ် ၁၁၁၈ ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုဤ session ကိုခံစားခြင်းနှင့်ဟုတ်ကဲ့, ကံကောင်းပါစေမျှော်လင့်ပါတယ်။
ကံကောင်းပါစေ။ သင်၏နံပါတ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်ပျော်ရွှင်သောအချိန်ပါ။ ငါသည်သင်တို့ကိုအားလုံးအကောင်းဆုံးယခု ciao အလိုရှိ၏
၂၀၂၁ တွင် Taurus အတွက်ဘယ်လသည်ကောင်းပါသလဲ။
နို ၀ င်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလများအတွင်းသင့်မိသားစုတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေနပ်အားရမှုရှိလိမ့်မည်။ မိခင်၏ကျန်းမာရေးကိုသင်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည်ဒီဇင်ဘာလ 2021 မှအောက်တိုဘာလမှ။
ကျန်းမာရေးမေအနည်းငယ်မျှသာကိစ္စများနှင့်အတူကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျောင်းသားများသာမကလခအလုပ်များရှိသူများ၊မေအရာများကိုလေ့လာပြီးကောင်းစွာလုပ်ပါ။ သူတို့မေအားပေးမှုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆက်ဆံရေး: ဒီကာလအတွင်းလ, ဆက်ဆံရေးအတွက်လူတွေကသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလားအလာနှင့်အနာဂတ်စိုးရိမ်ပူပန်လိမ့်မည်။
Taurus လစဉ်များအတွက် Horoscopeစက်တင်ဘာ2020 ။စက်တင်ဘာ2020ကHoroscope ဟောကိန်းများကအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်မှန်းချက်များသည်ယင်းကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုအကြံပြုထားသည်လ။ ဗီးနပ်စ်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုလမ်းပေါ်တွင်တွေ့နိုင်သည်ကကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည်အိမ်၏လှပမှုအတွက်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများပေါ်တွင်ငွေဖြုန်းသည်။
ဒုတိယနေရာတွင်သင်နှင့် Tauruses တွေ့လိမ့်မည်ဘီလျံနာ ၂၄ ယောက်ဒီရာသီခွင်အုပ်စုတွင်စာရင်းတွင်။ ထိပ်ဆုံးသုံးခုကိုအနိုင်ရရှိသူမှာ Fortune ဘီလျံ ၄၀၀ နှင့် ၂၃ ခုရှိသည့် Libra များဖြစ်သည်။
၂၀၂၂ Taurus အတွက်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်မလား။
၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် Taurus ပညာရှင်များအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောနှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကတိပြုသည်။ သူတို့ကပရိုမိုးရှင်းမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်အဆင့်မြင့်ရန်ဘဏ္benefitsာရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူ။ အိပ်ပျော်နေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ရှင်သန်လာမည် ဖြစ်၍ သင်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ အခြားသူများ၏အမြင်များကိုသင်လိုက်လျောရန်သင်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
Taurus soulmate ကားအဘယ်သူနည်း
သင်က Taurus တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သင်ကြုံတွေ့ရပါကကဗျာ, Libra, ဒါမှမဟုတ် Pisces, သူတို့ကိုအခွင့်အလမ်းပေးရန်မကြောက်ပါနဲ့။ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်တစ် ဦး ၏အဆိုအရဤရာသီဥတုလက္ခဏာသုံးမျိုးသည် Taurus ၏ဝိညာဏအဖော်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။တကျိပ်တပါး။ 2020 ။
က& Libra: မင်းရဲ့ကံကောင်းတဲ့နေ့သောကြာနေ့ပါ၁၃ ။ 2021 ။
သူတို့သည်အလွန်တရာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်သာလွန်ထူးကဲသော၊ကသူတို့ရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကိုကိုယ်စားပြုသောနွားကဲ့သို့သောဒေသခံများသည်ဒေါသထွက်တတ်ကြသော်လည်းဒေါသထွက်လျှင်တုန်လှုပ်သွားနိုင်သည် အောက်မှာမွေးဖွားလူကလက်မှတ်ထိုးအခြားအရာအားလုံးထက်သမာဓိရှိတန်ဖိုးထား၃၀ 2021 ။
Taurus 2021 အလုပ်အကိုင်ဘယ်လိုနေလဲ။
ကသင်သည်ရှေ့နှစ်အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုလိုအပ်သည်Taurus 2021 Horoscopeရှေ့ဆက်အနည်းငယ်အခက်အခဲများကိုပြသသည်။ သငျသညျနည်းလမ်းများစွာအတွက်ကြီးမားသောပွင့်လင်းတံခါးများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရလိမ့်မယ်။ ရှင်းလင်းမှုမရှိခြင်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်Aprilပြီနှင့်သြဂုတ်လအတွင်းရှိလုပ်ငန်းအပေါ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်2021။